लकडाउले दिमाक खराब भयो ? हेर्नुहोस् यो भिडियो | Khash Khabar
गृह लकडाउले दिमाक खराब भयो ? हेर्नुहोस् यो भिडियो
लकडाउले दिमाक खराब भयो ? हेर्नुहोस् यो भिडियो
२४ चैत्र २०७६, सोमबार १४:५२
काठमाडौं । देश हाल लकडाउनमा छ, सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बाक्लो देखिएको छ । सुरक्षाकर्मीले सडकमा गुडेका प्रत्येक सवारीसाधनको चेकजाँचमा कडाइ गरेका छन् । अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर ननिस्कन सरकारले जारी गरेको आदेश उल्लङ्घन गर्नेविरुद्ध कडारूपमा प्रस्तुत भएको प्रहरीले काठमाडौँबाट केहिलाई नियन्त्रणमा समेत लिएको छ । नेपाल प्रहरीले लकडाउन बिनाकारण उल्लंघन गर्नेलाई सडकमा निस्कनेहरुलाई भेटिएकै ठाउँमा दुई घण्टा उभ्याउने नीति प्रहरीले लिएको छ ।
सरकारले लिएको यो लक डाउनको नीति एक प्रकारले हामी जनताको लागि उचित नै हो । कोरोना भाइरस मानिस मानिसको सम्पर्कबाट सर्न सक्ने हुँदा जति सक्दो अरुको सम्पर्कमा नबसी आइसोलेसनमा बस्नु नै उपयुक्त उपाय हो । त्यसअर्थमा हामीले हाम्रै लागि भिडभाड वा अन्य व्यक्तिको सम्पर्कमा रहनु हुदैन ।
तर यसरी घरमै बस्दा हामी समय कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने कुरा सोँचिरहेका हुन्छौँ । कोही त चिन्तीत पनि छौँ । कसैलाई त आफ्नो ब्यापार चौपट भयो भनेर दुःखित पनि छौँ । तर व्यापार घाटा त कुनै न कुनै दिन पुनःप्राप्ति भैहाल्छ, कोरोना जस्तो जटिल रोग लाग्यो भने त ज्यानैबाट हात धुन पनि पर्ने हुन्छ ।
अब कुरा गरौँ लकडाउनमा समयलाई कसरी सहि सदुपयोग गर्ने भन्ने बारे । एक सफल व्याक्तिको गुणहरुमध्ये एउटा गुण भनेको जुनसुकै प्रतिकुल परिस्थितिमा पनि अवसर पत्ता लगाउनु हो । आजको हाम्रो देशमा मात्र होइन धेरै देशमा लकडाउन चलिरहेको छ । यो समयावधिमा तपाईले आफ्नो समय कसरी व्यतित गर्नुहुन्छ, त्यो तपाईको हातमा नै छ ।
कोहि मान्छे दिनभर फोनमा बसिको पनि देखिन्छ वा टिभी र फिल्म हेरेर समय कटाउँछन् ।
यो सबै गर्नु नराम्रो त पक्कै होइन । तर दिनको अन्त्यमा तपाई आफैले आफ्नो दिनको समिक्षा गर्नुहोस् । तपाई कदापी खुसी महसुस गर्नुहुन्न । मनोरन्जनको पनि सिमित समय हुन्छ । यदि तपाई दिनमा ६ घन्टा काममा बिताउनुहुन्छ भने १ घन्टा मनोरञ्जनमा विताउन उचित होला तर दिनभरी मनोरन्जनमा भूल्नु भनेको पछि यो समयलाई सम्झेर पछुताउनु हो ।
तर हरेक समय फोन र मनोरञ्जनमा झुन्डिनुभयो भने तपाईले धेरै ठूलो अवसर गुमाउँदै हुनुहुन्छ । मान्नुहोस् परिस्थिति वा भगवानले तपाईलाई यी समय दिएका छन् सहि सदुपयोग गर्नू भनेर । सायद यस्तो समय पछि नआउला । यो समयलाई सहि सदुपयोग कसरी गर्ने त ?
तपाई कोरोना सम्बन्धी समाचर भन्दा जानकारी लिनुहोस
हजुर ठिक सुन्नुभयो । सोसेल मिडियाहरुमा यति धेरै कोरोना सम्बन्धी समाचारको भिड छ । यीसबैको पछि लागेर हराउनु वा अन्योलमा पर्नु भन्दा डब्लु एच.ओ.को वेवसाइटमा भएका जानकारी र सरकारले दिएको जानकारीहरुबारे अपडेट रहनुहोस्
१. आफ्नो क्षेत्रमा काम लाग्ने ज्ञान लिनुहोस्
तपाई जुन क्षेत्रमा भए पनि यो समयको सहि सदुपयोग गरेर आफ्नो क्षेत्रमा एक कदम अगाडी जानुसक्नुहुनेछ ।
यदि तपाई बिजिनेशम्यान हुनुहुन्छ भने तपाईले डिजिटल मार्केट भनेको के हो भन्नेबारे युट्युबबाट वा अनलाईन किताब बाट थाहा पाउन सक्नुहुनेछ । तपाई आफ्नो विजिनेश सम्बन्धी व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धी किताब वा भिडियोबाट ज्ञान लिनसक्नुहुनेछ ।
यदि तपाई विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने दिनहुँ स्कुल वा कलेज जानुपर्ने भएकोले पढ्न छुटेका वा नबुझेका पाठहरु पढेर समयको सदुपयोग गर्नुसक्नुहुनेछ ।
तपाई जुनसुकै क्षेत्रमा भएपनि यो समयलाई आफुले आफैलाई आफ्नो क्षमता बढाउन उपयोग गर्नु सक्नुहुनेछ ।
दिनभरी सुत्नुले पनि तपाईलाई कुनै हदमा पुगेर निराशा जगाउँछ । त्यसैले यो अबधिमा आफ्नो सुताईको समयलाई अन्य दिनमा जस्तो छ त्यस्तै प्याट्रन बनाउनुहोस् । कम वा बढी समय नसुत्नुहोस् ।
३. व्यायाम तथा योगा
यो समय तपाईको शारिरीक स्वास्थलाई ध्यान दिन जरुरी छ । साथसाथै तपाईको मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । यस्को लागि दैनिक विहानको समय निकालेर योगा तथा ब्ययाम गर्नु फाइदाजनक हुन्छ ।
३. आफ्नो सोख अनुसारको ज्ञान सिक्नुहोस
दिनहु काममा ब्यस्त रहनुपरेकोले तपाई आफूलाई मनपर्ने काम वा शोखको काम गर्नु नपाएको हुन सक्छ । तपाईले यो समयलाई सहि सदुपयोग गरेर ति चाहनालाई घरमै बसेर पूरा गर्नुसक्नुहुनेछ । जस्तै तपाई गितार सिक्नसक्नुहुनेछ । तपाई पब्लिक स्पिकिङ सिक्न सक्नुहुनेछ । तपाई आफ्नो अंग्रेजी कसरी सुधार्ने भनेर अध्ययन गर्नुसक्नुहुनेछ । आदि
४. पुस्तक पढ्नुहोस
पक्कैपनि हामीमाझ केहि पुस्तक पढ्नको लागि किनिएको हुन सक्छ जसलाई समय नपाएर हामिले त्यतिकै थन्काएर राखिएका छौँ । या अबधिमा तपाईले किताब पढेर समयको सदुपयोग गर्नसक्नुहुनेछ ।
५. परिवार सँगको समय
प्राय हाम्रो समय भागदौडमा नै बितेको हुन्छ । त्यसैकारण हामी आफ्नो परिवार सदस्यसँग राम्रोसँग कुरा गर्ने समय नमिलेको हुन सक्छ । यो समयमा आफ्नो परिवारको सदस्यसँग नजिकिनुहोस् । सानासँग ज्ञान बाढ्नुहोस् कुरा सुन्नुहोस् । ठूला सदस्यको अनुभव सुन्नुहोस् ।
यो समय खेर फाल्नुभयो भने…..
यदि तपाई यो समयमा केहि गर्नु भएन भने तपाईमा निराशाको भावना आउँन सक्छ । तपाई बन्धक भएको महसुस गर्नुहुन्छ । यो सोँच नआउनको लागि तपाई दिनलाई तीन भागमा विभाजन गर्नुहोला ।
पहिलो साधारणतया तपाईले गर्दै आउनुभएको काम जस्तै सुत्ने खाने वा सरसफाई । दोस्रो मनोरञ्जनः मनोरञ्जन पनि केहि हदमा आबस्यक छ । र तेस्रो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, सिकाई । कुनै पनि कुरालाई सिक्ने काम गर्नुभयो भने तपाई आफ्नो क्षमता दिनदिनै बढेको पाउनुहुनेछ । तपाईलाई दिन व्यार्थमा गएको जस्तो लाग्दैन । तपाईले नयाँ कुरा सिक्न छोड्नुभयो भने यो समयमा तपाईलाई जिन्दगी रोकिएको जस्तो लाग्न सक्छ, यसले चिन्ता वा मानसिक तनाब बढाउँन सक्छ । त्यसैले समयको सदुपयोग जरुरी छ ।
लकडाउनले कोरोना निर्मूल नै पार्छ भन्ने कुरा चाहिँ अबस्य होइन । डब्लु एच. ओ. का डिरेक्टर जनरल टेड्रोस एधानोमका अनुसार लक डाउन भनेको एक किसिमको समय किन्नु हो, यो समयमा रोगलाई फैलिने प्रकृयालाई न्यूनिकरण गर्दै कम क्षती गराउँदै रोगको उचित खोप ननिकाल्दा सम्म संक्रमित संख्या घटाउनु हो ।
त्यसैले जोखिम रहेसम्म लकडाउनको पूर्ण पालना गरौँ, सदुपयोग गरौँ । आफू र आफ्ना परीवारजनलाई जनचेतना फैलाऔँ, सुरक्षित रहौँ ।
भिडियो मन परेमा एक शेयरको अपेक्षा राख्छु । धन्यवाद ।
# #lockdown mood